Canalys: Apple ဟာ ကမ္ဘာ့ ဝတ်ဆင် နိုင်တဲ့ လက်ပတ် ဈေးကွက်မှာ ထိပ်ဆုံး နေရာ ပြန် ရောက်လာပြီး Xiaomi နဲ့ Huawei တို့ နောက် က လိုက် နေ ပါတယ် - Pandaily
Canalys: Apple ဟာ ကမ္ဘာ့ ဝတ်ဆင် နိုင်တဲ့ လက်ပတ် ဈေးကွက်မှာ ထိပ်ဆုံး နေရာ ပြန် ရောက်လာပြီး Xiaomi နဲ့ Huawei တို့ နောက် က လိုက် နေ ပါတယ်
Nov 26, 2021, 18:22ညနေ 2021/11/29 12:42:27 Pandaily
သောကြာ နေ့မှာအိ တြ မ္၂၀၂၁ ခုနှစ် တတိယ သုံးလပတ် မှာ ဝတ်ဆင် နိုင်တဲ့ လက်ပတ်ကြိုး ကိရိယာ တွေကို ကမ္ဘာ့ တင်ပို့ ရောင်းချ မှုဟာ ယူနစ် ၄၇. ၈၂ သန်း အထိရောက် ရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၁၁ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်း သွားခဲ့ပြီး Apple ကတော့ ယူနစ် ၇. ၃၃ သန်း ရောင်းချ မှုနဲ့ နံပါတ် တစ် နေရာကို ပြန်ရောက် သွားတယ်လို့ နည်းပညာ ဆန်း စစ်မှု ကုမ္ပဏီ Canalys ရဲ့ နောက်ဆုံး အချက်အလက်တွေကို ကိုးကား ဖော်ပြထားပါတယ်။
ထို့အပြင် အချက်အလက်များအရ Xiaomi သည် Apple ၏ ၇. ၂၁ သန်း တင်ပို့ မှုနှင့် ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း ဈေးကွက် ဝေစု ထက်အနည်းငယ် နိမ့်ကျ သည့် ကာလအတွင်း ကမ္ဘာ့စျေးကွက် တွင် ဒုတိယ နေရာတွင်ရှိသည်။ Huawei သည် တတိယ နေရာတွင် ရှိပြီး ယူနစ် ၅ သန်း တင်ပို့ ပြီး စျေးကွက် ဝေစု ၁၁ ရာခိုင်နှုန်း ရှိသည်။ Samsung ႏွင့္ Fitbit တို႔သည္ အလံုးေရ ၄ ဒသမ ၂၃ သန္း ႏွင့္ အလံုးေရ ၃ ဒသမ ၇၁ သန္း အသီးသီး ျဖင့္ အဆင့္ ၄ ႏွင့္ ၅ ေနရာတြင္ ရပ္တည္ ေနျပီး ေစ်းကြက္ ေ၀ စု ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကိုယ္စားျပဳ ေနသည္။
တရုတ်ပြည်မကြီး ဈေးကွက်တွင် ထိပ်တန်း ကုန်အမှတ်တံဆိပ် ငါး ခုမှာ Huawei, Xiaomi , XTC, Apple နှင့် Honor တို့ဖြစ်ပြီး စျေးကွက် ဝေစု ၃၁% ၊ ၁၉% ၊ ၁၀% ၊ ၅% နှင့် ၄% အသီးသီးရှိသည်။
အာရွ-ပစိဖိတ္ ေဒသတြင္ ထိပ္တန္း အမွတ္တံဆိပ္ ငါး မ်ိဳးမွာ Samsung, Apple, Noise, Xiaomi ႏွင့္ Xiaoboat တို႔ ျဖစ္ၿပီး ၁၄%, ၁၂%, ၁၂%, ၁၁% ႏွင့္ ၁၀% အသီးသီး ရွိေနသည္။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Huawei သည် ထုတ်ကုန် အသစ်များ ကိုထုတ်လွှင့် သည်။ 2-in-1 laptop, lipstick headphone, professional runtime
အစောပိုင်းက Huawei ၏ စားသုံးသူ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း COO He Gang က Huawei ၏ smart wearable devices များ စုစုပေါင်း တင်ပို့ ရောင်းချ မှုသည် သန်း ၈၀ ကျော် သွားပြီ ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ကုမ္ပဏီ၏ အားကစား ကျန်းမာရေး အက် ပလီကေးရှင်း သည် လစဉ် ပျမ်းမျှ သုံးစွဲသူ ၈၃ သန်းကျော် ရှိပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ရှိ ၀ န်ဆောင်မှု သုံးစွဲသူ စုစုပေါင်း သည် သန်း ၃၂၀ ကျော်ရှိသည်။
တစ်ပတ်ရစ် ကုန်သွယ်ရေး ပလက်ဖောင်း Huanhuan Group သည် Q4 စမတ်ဖုန်း ကုန်သွယ်မှု အစီရင်ခံစာကို ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်
တစ်ပတ်ရစ် ဈေးကွက်တွင် ရရှိနိုင်သည့် 5G စမတ်ဖုန်း များ၏ အချိုးမှာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ၃၈. ၃၃% အထိမြင့်တက် လာကြောင်း တစ်ပတ်ရစ် ကုန်သွယ်ရေး ပလက်ဖောင်း Turn Group မှ အင်္ဂါနေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Baidu သည် Double Eleven Shopping Festival အချက်အလက်များကို ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်
ကြာသပတေး နေ့တွင် Baidu App သည် ၂၀၂၁ Double Eleven Shopping Festival တွင် ပူပြင်း သည့် အကြောင်းအရာ များနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
University of Fusion က ပညာရှင်တွေဟာ စမတ်ထည်တစ်မျိုးကို တီထွင်ပြီး Display system နဲ့ သုံးစွဲသူတွေအတွက် digital screen ဖြစ်လာစေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။